प्रशासनले बाड्ने तेलको कुपन पहुच भएकालाई मात्रै ! – Saurahaonline.com
प्रशासनले बाड्ने तेलको कुपन पहुच भएकालाई मात्रै !
चितवन, ०८ माघ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बाडेको तेलको कुपन दुरुपयोग भएको पाईएको छ । अत्यावश्यक सेवाका लागी भनेर मौजात राखेको तेल वितरण गर्दा लक्षित वर्गले भन्दा पनि आफ्नो पहुच भएका र फुसदिला मान्छेहरुले मात्रै पाउने गरेको गुनासो बढेको छ ।
प्रशासन कार्यालयले तेल वितरण गर्न थालेदेखि केहि मान्छेको दैनिक धन्दा नै प्रशासन कार्यालय धाउने र कुपन बोकेर जाने भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेत नारायण शर्माले बताए । एउटै मान्छेले पटक–पटक एक भन्दा बढि लेटर प्याड प्रयोग गरी तेल लाने गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यालयमा बिनाकामका मान्छेहरु समेत घण्टौ धाएर तेल लिनका लागी लाईन बसेको उनको भनाई छ ।
कार्यालयमा अधिक भिड हुदा व्यवस्थित तवरले तेल बितरण गर्न नसकिएकोले लक्षित वर्गले त्यो सेवा पाउन नसकेको उनले बताए । कार्यालय बाट टोल सुधार संस्था, युवा कल्व देखी विभिन्न कनसलटेन्सीहरुले समेत लेटर प्याड प्रयोग गरि तेल लानेगरेका छन् । केहि मान्छेले नक्कली लेटर प्याड बनाएर समेत तेलको माग गरेको पाईएको छ ।
बजारमा तेल बितरण भएको दिन प्रशासन कार्यालयमा कुपन लिन धाउनेहरुको जात्रानै लाग्ने गरेको छ । जुन भिडलाई ब्यवस्थीत गर्न प्रशासन कार्यालयले करिव आधा दर्जन बढि शशस्त्र प्रहरी परिचालन समेत गर्न बाध्य भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद प्रकाश सिहं, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनारायण शर्मा घिमिरे देखि प्रशासकिय अधिकृत हरि प्रसाद शर्मा, रामचन्द्र ढकाल हुदै सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म कुपन व्यवस्थापनमा खटिने गरेकाले नियमित कामकारर्बाही प्रभाबित भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
तेल लिन आउने भिडका कारण नागरिक्ता पासपोर्ट लगायतका सेवा लिन आउने सेवागााहिलाई ठुलो असर परेको सेवाग्राहिहरुले गुनासो गरेका छन् । कार्यालयले तेल बितरण प्रक्रिया लाई थप ब्यवस्थीत बनाउन आवस्यक रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए
तेल बितरणको जिम्मा बिषयगत कार्यालय लाई दिन सके केहि हद सम्म समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ ।
यसै बिच कार्यालयले असोज १२ देखी आजको मिती सम्म १७ लाख ४८ हजार लिटर डिजल र ६ लाख १४ हजार लिटर पेटेल बितरण गरेको जनाएको छ ।